Maamulka gooni isu taaga ah ayaa mowqif cad ka qaatey guddigaasi oo ka koobnaa lix xubnood.
HARGEYSA, Somaliland - Maamulka gooni isu taaga ah ayaa wuxuu jawaab ka bixiyey war-saxaafadeedkii madaxweyne Farmaajo ee uu ku magacaabey guddiga heer qaran ee wada hadalada dowladda iyo Somaliland.
Guddigaasi oo ka kooban lix xubnood ayaa waxaa waajibaadkooda lagu sheegay ka shaqeynta dib u heshiisiinta iyo wada xaajoodyadda labada dhinac.
HOOS KA AKHRISO BAYAANKA SOMALILAND
Wada hadaladda dowlada federaalka iyo Somaliland ayaa hakad ku jira tan iyo sanadkii 2014-kii, xiligaasi oo ay ugu dambeysay in ay labada dhinac miiska wada xaajoodka isugu yimaadaan.
Somaliland ayaa sheegata madax banaani tan iyo sanadkii 1991-dii balse caalamka ayaa u arka maamul goboleed hoostaga dowladda federaalka Soomaaliya.
Somaliland ayaa sheegtay in aysan diyaar u ahayn Kulanka hadii lagu qabto...
Farmaajo oo guddi u magacaabay wada hadaladda DF iyo Somaliland
Soomaliya 17.07.2019. 18:23